5 ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင် Explore ရန်လျော့နည်းလူအစုအဝေးမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား >5ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင် Explore ရန်လျော့နည်းလူအစုအဝေးမြို့ကြီးများ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20/11/2020)
ပြင်သစ်က၎င်း၏လှပသောမြို့ကြီးများနှင့်ကျော်ကြားအထင်ကရအဆောက်အကျေးဇူးတင်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ခရီးသွားဧည့်ဟော့စပေါ့ဖြစ်ပါတယ်. တိုင်းပြည်တစ်အိပ်မက်ဖြစ်ပါသည် ခရီးလမ်းဆုံး ယင်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျော်ကြားခြင်းနှင့် အရသာအစားအစာ. များစွာသောခရီးသွားဧည့်နေစဉ် ပဲရစ်သိုးစုကို, တမြို့လုံးမကြာခဏအလွန်ထူထပ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်, အထူးသဖြင့်အတွင်း နွေရာသီ. ကံကောင်းတာက, ပြင်သစ်ရှိပါတယ် ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှဤမျှလောက်ပိုပြီး ကိုယ့်ပဲရစ်စ်နှင့်ကျွန်တော်အောက်ကလျော့နည်းလူစည်ကားမြို့ကြီးများ၏ငါးစူးစမ်းထက်.
Reims တမြို့ဖြစ်ပြီးရှန်ပိန်သောစပျစ်ရည်ဒေသဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးလုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့များမှာ. ဒါဟာအချို့ရတာဟာ ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးကျော်ကြားတဲ့စပျစ်ဥယျာဉ် နှင့်ခရီးသွားများအတွက်င်း၏ငြိမ်းချမ်းလေထုကိုခံစားဖို့သေချာ. သင်တစ်ဦးရှမ်ပိန်ပန်ကာဖြစ်လျှင်, တစ်ဦးအလည်အပတ်ပေးဆောင်တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဒေသမယုံနိုင်လောက်အောင်လှပပေမယ့်အများကြီးလျော့နည်းလူစည်ကားနိုင်ငံ၏မြို့တော်ထက်. ရှန်ပိန်အတွက်နေတုန်း, တစ်ဦးပဲ့ထိန်းအိမ်အောက်ခန်းယူရန်သေချာစေပါ ခရီးစဉ် နှင့်ရှန်ပိန်ကိုဖန်ဆင်းဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ.
Reims ရထားမှ Metz
လူဇင်ဘတ် Reims မှရထား
လိုင်ယွန်တစ်ခုသာငြိမ်းချမ်းသောမဟုတ်ပါဘူး အားလပ်ရက်များ destination သို့ပေမယ့်လည်း ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ ၎င်း၏ကျော်ကြားရောမအပျက်အယွင်းမှုကြောင့်နှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပြတိုက်. သင်တစ်ဦးအစားကောင်းကြိုက်သူများရောက်နေတယ်ဆိုရင်, လိုင်ယွန်အများဆုံးအရသာအချို့ကိုပျော်မွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာများကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ခဲဘွယ်စားဘွယ် ပြင်သစ်မှာ, အကြောင်းကိုအကြံဉာဏ်ကိုရှာခြင်းငှါရန်သေချာစေပါပေမယ့် ကျန်းမာတည်းခို ပြည်ပမှာအသစ်သောအစားအစာများကိုကြိုးစားနေစဉ်.
စိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့ ဗိသုကာအတတ်ပညာ, လိုင်ယွန်လည်းနေအိမ်ဖြစ်ပါတယ် အများအပြား Renaissance အသင်းတော်များ သင်တွေ့လိမ့်မည်လုံးကျော်ကွဲပြားမြို့.
သငျသညျရေမွှေးအတွက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်, မြက်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီးဖြစ်ပါသည်. သငျသညျက၎င်း၏ငြိမ်းချမ်းကြုံတွေ့င့်ပြီးတာနဲ့, စည်းစိမ်ကြီသော လမ်းများ, သင်ကိုယ်တိုင်အဖန်ဖန်ပြန်လာလိုသောရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. မြက်ပြင်သစ် Riviera တလျှောက်တွင်တည်ရှိသောအဆင်းလှသောဦးတည်ရာသည်နှင့်, အဆိုပါအထင်ကြီးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဒေသခံတွေ ဒီမှာသင့်ရဲ့ပြင်သစ်လေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်ပါသည်!!
ပြင်သစ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျော်ကြားသော, Marseille တစ်ဦးအထင်ကြီးကမ်းရိုးတန်းရာသီဥတုနှင့်အတူတစ်မြို့ဖြစ်၏. ဒီနေရာတွင်မော်ကွန်းအပျက်အယွင်းများနှင့်အံ့သြဖွယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ် အနုပညာစင်တာများ သငျသညျစွန့်ခွာရန် နာရီတရားတော်. အပန်းဖြေရှာဖှသေူမြားအတှကျ, Marseille သင်အတွက်ရေချိုးနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းခြေမှနေရာဖြစ်သည် သာယာသောပင်လယ်. အထဲတွင်အပန်းဖြေဖို့ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်ဣနြေ္ဒတည်နေရာနှင့်ပြည့်စုံသည်အဖြစ် Marseille နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်း.
မကြာခဏပြင်သစ်ရဲ့အများဆုံး underrated မြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းစဉ်းစား, လိုင်လီပိုမိုရေပန်းစားပြင်သစ်ခရီးစဉ်အချို့ထက်လျော့နည်းလူစည်ကားသို့သော်အညီအမျှလှပ. ခရီးသွားဧည့် အကွေ့အကောက်များသောလမ်းကြောင်းမှတဆင့်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ရောင်စုံဗိသုကာနှင့်စည်ကားခံစားနိုငျ လေထု လမ်းတစ်လျှောက်. အနုပညာချစ်သူများအဘို့, အဆိုပါ Fine Arts ၏နန်းတော် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးအနုပညာစုဆောင်းမှုနေရာဖြစ်သောကြောင့်ပြတိုက်သည်မဖြစ်မနေလည်ပတ်ရမည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ပြင်သစ်သို့သွားရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံတွေကိုခရီးလှသည့်အခါအထက်ပါမွို့တစုံတမွို့လက်လွတ်ဖို့မသခြောပါစေ! သူတို့လျော့နည်းလူစည်ကားဖြစ်သကဲ့သို့, သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ရွေ့လျားအင်အားစိုက်ထုတ်ပါလိမ့်မည်နှငျ့သငျတစျခုစီမြို့များ၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်. ထိုမြို့ရှိသမျှတို့ကိုဘုံရှိအရာတစ်ခုမှာလှပသောရှုခင်းဖြစ်ပါတယ် – ဒါပေါ့ – အံ့သြဖွယ်အစားအစာ, နှင့်နောက်ဆုံးမမေ့မလြော့ပါ, ဥရောပ၌လူတို့နှင့်အတူခရီးသွားလေ့ကျင့် တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-less-crowded-cities-to-explore-in-france/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#champagne #grasse #marseille #traveleurope lille လိုင်ယွန် travelfrance